Noho ny toerana kely amin'ny trano fisakafoanana dia mihabetsaka hatrany ny mihaino ny fanaka, izay azo ovaina ho zavatra hafa. Ny lazan'ny besinimana dia nahazo seza manokana, izay natao tamin'ny andron'ny Fanjakana Ottoman, izay "sofa" no anarany.
Fampionona avy any atsinanana sy toetra mampiavaka ny sofa
Ny sofina nentim-paharazana dia mitovy amin'ny sofina lehibe, izay misy ny heriny dia mitovy amin'ny haavony. Tany Torkia, nisy sombina toy izany natao mba hitsaharana ny tolakandro ary napetraka tao an-tranon'ireo olo-manan-kaja ambony. Ireo mpanakanto maoderina dia nahita io fanaka io tena niavaka ary nanomboka namokatra ny sofa, izay efa very ny endriny nentim-paharazana ankehitriny. Ankehitriny, ny fiaramanidina ambony dia nosoloina kirihitra, ary ny tombony lehibe indrindra amin'ny sofina dia ny fahafahana manova ny fandriana. Afaka misaraka amin'ny fomba maro ny osmanita. Ny rafitra tranainy sy azo itokisana indrindra dia ny rafitra "boky", rehefa mipoitra ny seza eo anoloana, ary ny aoriana dia midina any amin'ny toerana marindrano. Azo atao ihany koa ny môtera amin'ny "famolahana", "clamshell", "clic-clack" ary ny hafa.
Na izany aza, tsy mifarana ny fanovana. Ny kabine sofa-sofa dia afaka manao ny asan'ny cabinet ihany koa, satria modely sasany dia omena amin'ny mpiasan'ny fandriana ambany. Afaka mametraka lamba lambam-bolo, pillows, bodofotsy ary zavatra goavam-be hafa izy ireo izay haka toerana be ao anaty ordinatera. Ireo boaty dia azo amidy amin'ny zana-trondro na fantsona manokana ho an'ny fivoahana. Sombina sofa misy hosoka dia fitaovana manerana izao tontolo izao izay mamonjy toerana ao an-tranonao ary mitondra fifaliana.
Raha te hampiasa lakana kabine ianao toy ny fandriana, fa tsy sofina, dia mila mihaino tsara ny kalitaon'ny matsora ianao. Tokony ho azony atao tsara ny matory, raha tsy izany dia tsy hahatsiaro ho matotra ianao.
Toera-pofona iray ho an'ny garderie
Noho ny fahaizan'izy mivady, dia nividy sofina matetika ho an'ny efitranon'ny ankizy iray. Ankehitriny, ny mpamokatra dia mamokatra modely manokana izay kely kokoa ary rakotra lamba marevaka izay mifanaraka tsara amin'ny kilalaon'ny ankizy . Ny ray aman-dreny sasany dia mividy sofina lehibe indray mandeha, izay tsy maintsy ovaina rehefa mihalehibe ilay zaza.
Ny fandrian'ny zaza ao amin'ny sofa dia vita amin'ny fitaovana voajanahary, ary ny rindriny dia mihalalina araka izay azo atao mba tsy hahatonga ny zaza tsy hetezana tsy nahy. Ny modely ho an'ny ankizy koa dia manana toeram-piraketana, ka tsy ilainao ny handefa toerana iray ao amin'ny efitrano fitahirizana fikojakojana ny ankizy.
Sampana misy hackock
Mpanao akanjo miaraka amin'ny fitaratra amin'ny efitrano fandriana
Ny vy fanorenana dia miendrika voninkazo
Karazana karazana fantsona ho an'ny valindoha tsara kokoa?
Kabine be lavaka
Blue wallpapers ao amin'ny aterineto
Trano amin'ny fomba maoderina
Trano ho an'ny lakozia
Tabila mihidy ho an'ny efitra fandraisam-bahiny
Lisa Minelli tamin'ny fahatanorany
Kitapo ho an'ny bisikileta
Sivily tsy miasa
Mpandrindra metaly hanaovana lesona amin'ny asa
Nisaraka tamin'i Christopher Jareki vadiny i Alicia Silverstone
Mikarakara snails misy ahaatin ao an-tokantrano - tsiambaratelo sy nuancen'ny votoatiny
Ny angano ho an'ny gazety ve dia angano na zava-misy?
Ho an'i Kelly Clarkson, ny vadiny Brandon Blackstock dia nanao vasectomy
Lesotho - toetrandro
Sakafo mainty hariva
Myoma avy amin'ny tranonjaza kely
Hikirako isan'andro - inona no tokony hatao?
Drew Barrymore dia manana tantara vaovao